Axnew Display ကိုနည်းပညာ Co. , Ltd မှ - ကြှနျုပျတို့အကွောငျး။
Axnew Display ကိုနည်းပညာ Co. , Ltd မှ
Axnew Display ကိုနည်းပညာ Co. , Ltd မှ Display ကိုနည်းပညာခေါင်းဆောင်တစ်ဦးအဖြစ်၎င်း၏ကိုယ်ပိုင်စက်မှု display ဈေးကွက်ဖွံ့ဖြိုးခဲ့သည်။
2009 ခုနှစ်မှစ. Axnew Display ကိုနည်းပညာ Co. , Ltd မှ Display ကိုနည်းပညာခေါင်းဆောင်တစ်ဦးအဖြစ်၎င်း၏ကိုယ်ပိုင်စက်မှု display ဈေးကွက်ဖွံ့ဖြိုးခဲ့သည်။ အရောင်းဌာနကျွန်တော်တို့ရဲ့ဖောက်သည်နည်းပညာပိုင်းဆိုင်ရာပံ့ပိုးမှုနှင့်ပရော်ဖက်ရှင်နယ်အကြံပြုချက်ကိုထောက်ပံ့ပေးနှစ်ပေါင်းပရော်ဖက်ရှင်နယ်အတွေ့အကြုံ, R & D ကိုပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုအမြဲကောင်းသောဖြေရှင်းချက်ဒီဇိုင်းနှင့်ကျွန်ုပ်တို့၏ clients များပေးရန်ကြိုးပမ်းလျက်ရှိသည်နှင့်အတူ, ကျွန်တော်တို့ရဲ့ပိုင်တစ်ဦးက / D ကိုဘုတ်အဖွဲ့နှင့်မော်နီတာစက်မှုစမ်းသပ်အောင်မြင်ပြီးနှင့်အီးတယ်နေကြသည်တီထွင် , FCC သည်, Rohs လက်မှတ်။
ထုတ်လုပ်မှုအုပ်စုသည်အများအပြားအကျိုးခံစားခွင့်များအများအပြားပေးသွင်းကြွယ်ဝအီလက်ထရောနစ်အစိတ်အပိုင်းများကိုနှင့်အရင်းအမြစ်များ, ပေးသွားမှာပါပိုင်ဆိုင်စေမည်ဖြစ်သောပိုထိရောက်ဖြစ်ထွန်းသော, ထိရောက်သောဖြစ်ရန်နှင့်အရေးအကြီးဆုံးကတော့, Axnew နှင့်ကျွန်ုပ်တို့၏ client များအကြားမိတ်ဖက်ခိုင်ခံ့စေမည်ကိုအကို enable တံ့သော tools များဖြစ်ကြသည် ကျွန်တော်တို့ကိုကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာပေးသွင်း။
လောလောဆယျကမ္ဘာတဝှမ်းကဒီစက်မှုဇုန် display ကိုအညီ clients များနှင့်အတူရေရှည်ဆက်ဆံရေးမျိုးကိုထူထောင်ခဲ့ကြသည်။
AXNEW display ကိုပြပွဲကနေတဆင့်ကျွန်ုပ်တို့၏စီးပွားရေး developes, အလီဘာဘာ, ကို Global အရင်းအမြစ် B2B ပလက်ဖောင်းလျှင်မြန်စွာသည်ဤ years.We 50 ကျော်တိုင်းပြည်များမှနဂိုပစ္စည်းကိရိယာများထုတ်လုပ်သူပါဝင်ပါသည်ကြောင်းဖောက်သည်များကယုံကြည်စိတ်ချ, ထိန်းချုပ်မှု device ကိုစက်မှုလုပ်ငန်း, အလိုအလျောက် applications များအသုံးပြုသူများသည်နေကြသည်။
ကျွန်တော်တို့ရဲ့မော်နီတာနှင့်စိတ်ကြိုက် displays.Our တည်ငြိမ်ပေးသွင်းအဓိကအားချွန်ထက် Auo, Chimei, ဘိုး, Samsung, LG ပြားဖြစ်ကြ၏, အထူးသဖြင့်စက်မှုတန်းသစ်ကိုနှင့်မူရင်းပြားကို အသုံးပြု. အပြင်းအထန်တောင်းဆို။
လူကြိုက်များနှင့်ကောင်းမွန်သောထုတ်ကုန်များ၏ Axnew ဝိညာဉ်ယုံကြည်ဝန်ဆောင်မှုအခြေခံမူကျွန်တော်တို့ကိုပိုကောင်းပြုပါကူညီပေးသည်။
ပွင့်လင်း frame ကို LCD ကိုဖြေရှင်းချက်●
● Touch ကို Panel ကို PCs ဖြေရှင်းနည်းများ
2009 ခုနှစ်တွင် Axnew'main ထုတ်ကုန် LCD ကိုပြား '' ကုန်သွယ်စီးပွားရေးနှင့်ပွင့်လင်း frame ကိုမော်နီတာ၏စံအရွယ်အစားရှိပါတယ်။
2012 ခုနှစ်တွင် Axnew ကျွန်တော်တို့ရဲ့စက်မှုတန်းမော်နီတာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ဖို့ 3-4 နည်းပညာဆိုင်ရာအင်ဂျင်နီယာများရှိပါတယ်။ ကျနော်တို့ကြမ်းတမ်းအလုပ်လုပ်ပတ်ဝန်းကျင်၌အကြှနျုပျတို့၏ display ကိုထောကျပံ့ဖို့, ကျယ်ပြန့်သောအပူချိန် (80 ဒီဂရီမှ -25 ဒီဂရီ) ဖြင့်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ကိုယ်ပိုင်စက်မှု controller ကိုဘုတ်အဖွဲ့တီထွင်ထုတ်လုပ်နိုင်ခဲ့သည်။
2014 ခုနှစ်, ကျွန်တော်တို့ရဲ့လူကြိုက်များထုတ်ကုန်န်းကျင်မှာ 45% -50% ပြည်ပပို့ကုန်အသံအတိုးအကျယ်ကိုတက်ယူရာပြင်ပတွင် applications များ, အဘို့အမြင့်မား brightess display တွေ, panel ကိုများအတွက် IP65 ရှေ့ bezel နှင့်အတူစက်မှုဇုန် Touch mount, လိုလားသူ capacitive touch နဲ့မော်နီတာဖြစ်ကြသည်။
Axnew အောင်မြင်စွာကမ္ဘာတဝှမ်းကဒီစက်မှုဇုန် display ကိုအညီ clients များနှင့်အတူရေရှည်ဆက်ဆံရေးမျိုးတည်ထောင်ခဲ့သည်။ အားလုံး display တွေအီး, FCC သည်, rohs လိုက်နာမှုနှင့်အတူဖြစ်ကြသည်။
2016 ခုနှစ်, Axnew ကျွန်ုပ်တို့၏စီးပွားရေးကိုတိုးချဲ့နှင့်ကျွန်ုပ်တို့၏အာမခံဝန်ဆောင်မှု gurantees, ဂျာမနီကနေတချို့မိတ်ဖက်, ကနေဒါအခြေခံပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုကျွန်တော်တို့ရဲ့အဓိကထုတ်လုပ်မှုနှင့်အာမခံဝန်ဆောင်မှုလုပ်နိုင်တရုတ်၌ရှိကြ၏။
အပြင်ဟောင်ကောင်အီလက်ထရောနစ်ပြပွဲ, ထိုင်ဝမ် Computex, ရှန်ဟိုင်း Touchscreen ပြပွဲစသည်တို့ကိုရှင်းလင်းစွာကျွန်ုပ်တို့၏ထုတ်ကုန်ပြသနိုင်ဖို့ကျွန်တော်တို့ကိုကူညီလိမ့်မယ်။ B2B ပလက်ဖောင်းဥပမာအလီဘာဘာကျွန်တော်တို့ရဲ့ဖောက်သည်အလွယ်တကူအရောင်းအပြုစေလိမ့်မည်။
နှစ်ပေါင်းပရော်ဖက်ရှင်နယ်အတွေ့အကြုံနှင့်အတူကျနော်တို့ 40 ကျော်တိုင်းပြည်များမှနဂိုပစ္စည်းကိရိယာများထုတ်လုပ်သူ, ထိန်းချုပ်မှု device ကိုစက်မှုလုပ်ငန်း, အလိုအလျောက် applications များအသုံးပြုသူပါဝင်ပါသည်ကြောင်းဖောက်သည်များကယုံကြည်စိတ်ချရသည်။
ယခုငါတို့ဥရောပတိုက်တွင်ပထမဦးဆုံး distrubutor ပြင်ဆင်နေကြသည်။ Axnew စိတ်ရင်းမှန်နဲ့သင့်ရဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုမျှော်လင့်!
ကျွန်ုပ်တို့၏ Axnew အဖွဲ့သည်ပြည်ပရောင်းချမှုရေးအဖွဲ့, ပြည်တွင်းအရောင်းရေးအဖွဲ့, R & D Center က, ဘဏ္ဍာရေးဌာန, လူ့စွမ်းအားအရင်းအမြစ်ဌာန, ထုတ်လုပ်မှုစက်ရုံပါဝင်ပါသည်။
ကျွန်ုပ်တို့၏စက်ရုံသန့်ရှင်းတဲ့အခန်းအလုပ်ရုံ,2ထုတ်လုပ်မှုလိုင်းများ, 1 မီးလောင်ရာအခန်းတစ်ခန်း,2ဂိုဒေါင်များပါဝင်ပါသည်။
သင်တို့သည်ငါတို့၏ကုမ္ပဏီ၏ထုတ်ကုန်စိတ်ဝင်စား 1.Once, စုံစမ်းရေးကော်မရှင်မှတှနျ့ဆုတျပါဘူးကျေးဇူးပြုပြီးကျွန်တော်တို့ကို .Our အရောင်းဌာန 48 နာရီအတွင်းသငျသညျမှနည်းပညာပိုင်းဆိုင်ရာပံ့ပိုးမှုနှင့်ပရော်ဖက်ရှင်နယ်အကြံပြုချက်ကိုထောက်ပံ့ပေး; R & D ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုအမြဲဒီဇိုင်းကြိုးပမ်းလျက်ကောင်းမကောင်းကိုဖြေရှင်းချက်ပေးလျက်ရှိသည်။
2.Every အမိန့်ကိုပင်သေးငယ်တဲ့ဒါမှမဟုတ်အမြောက်အများပမာဏတင်းကြပ်စွာလုပ်ငန်းအရင်းအမြစ်စီမံကိန်း (ERP) လိုက်နာမှုနှင့်အတူညီသည့်ထုတ်လုပ်မှုဘို့ငါတို့အပြောင်းအလဲနဲ့အချိန်ဇယားနှင့်လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများမှဘာသာရပ်ဖြစ်လိမ့်မည်။
3.Professional ဝန်ဆောင်မှုလက်ထောက်သင့်ရဲ့ကုန်ပစ္စည်းအခြေအနေများနှင့်သင့်အပြီးရောင်းချရန် status ကိုနှင့်အတူခြေရာခံမယ်။ ကျနော်တို့စိတ်ရင်းမှန်နဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ယုံကြည်ဝန်ဆောင်မှုအခြေခံမူငါတို့နှစ်ဦးနှစ်ဖက်အပြန်အလှန်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုဆက်ဆံရေးမျိုးကိုမြဲမြံစေကြကုန်အံ့မယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ်။
သူတို့သည်သင်၏ destination သို့ရောက်ရှိပြီးနောက်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အမိန့် 4.For ကျနော်တို့အဓိကအားဖြင့်အာမခံအသုံးအနှုန်းများသို့သူတို့ကိုငါထား၏။ ထိုအခါသူတို့ကအာမခံအတွင်း DOA နှင့် RMA န်ဆောင်မှုများပါလိမ့်မယ်။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဖောက်သည်တွေနဲ့သဘောတူညီခဲ့လျှင်ပုံမှန်အားဖြင့်စံအမိန့်များအတွက် 1 နှစ်အာမခံကျနော်တို့2နှစ်အာမခံဖို့တိုးချဲ့နိုင်မည်ဖြစ်သည်။3နှစ်အာမခံအချို့သောအထူးစီမံကိန်းများအတွက်အတူတကွဆွေးနွေးကြနိုင်မည်ဖြစ်သည်။
လိပ္စာ: Forth Floor, Yin Lian Tong စက်မှုဥယျာဉ်၊ Ai Lian Zhangbei လမ်းအမှတ် ၄၆၀; Long Gang District, Shenzhen China518172